﻿9အမျိုးမျိုးသောယောဂရှင်းပြသည် - ကျန်းမာရေး
စိတ်ကျန်းမာရေး ပြည်တွင်း Femina ပါဝါအမှတ်တံဆိပ် မိဘအုပ်ထိန်းခြင်း ကြံ့ခိုင်ရေး Celeb ကြည့်ပါ အိန္ဒိယ စိတ်ဖိစီးမှု၏ ထုတ်ကုန်များ Gynaec
ဟတ်ဟတ်? Ashtanga? ဤတွင်ရှင်းပြထားသည့်ယောဂအမျိုးအစားများ
ပြီးပြည့်စုံသောလေ့ကျင့်ခန်းအားကစား ၀ တ်စုံများကိုရွေးရန် ashtanga နှင့် vinyasa တို့အကြားခြားနားချက်ကိုကြိုးစားရှာဖွေရန်မလွယ်ကူပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့ဖုံးလွှမ်းရရှိပါသည်။ ဒီမှာ၊ လူကြိုက်အများဆုံးယောဂကိုးမျိုးကိုငါတို့ချိုးဖျက်ခဲ့တယ်။ သင်၏စာရရန်ယခုဖတ်ပါ အကယ် ယုံကြည်မှုနှင့်အတူအပေါ်။ (ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်ကိုလုပ်နေသည်ဟုသင်ထင်သည့်အခါ bikram အတန်းသို့တက်ခြင်းသည်ဖြေလျှော့ခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ) Namaste ။
သက်ဆိုင်သော: ၅ လေ့လာသူအားလုံးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ယောဂအမှားများ (နှင့်၎င်းတို့ကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်)
အလက်ဇန္ဒြာ Iakovleva / Getty Images
ကိုယ်ဟန်အနေအထားတစ်ခု sequence ကိုသုံးပြီး (asanas) အသက်ရှူနည်းစနစ်များ (ပရာယာယာ) နှင့်ဘာဝနာ (ဓန) ဟက်ဒါယောဂသည်ခန္ဓာကိုယ်ကို align နှင့်စိတ်ကိုအနားယူရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်ယခင်ကယူခဲ့သောယောဂအတန်းအစားအားလုံးနှင့်တူသည်ဆိုလျှင်ဟက်ဟ်သည်ခေတ်သစ်ယောဂအမျိုးအစားများကိုရည်ညွှန်းသည့်အလုံးစုံအကျုံးဝင်သည့်အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ (ရှုပ်ထွေးနေသည်၊ ငါတို့သိသည်။ ) သို့သော်သင်သည်သင်၏စတူဒီယို၏အချိန်ဇယားတွင်ဟက်ဟက်အတန်းအစားကိုတွေ့မြင်ပါကအခြေခံယောဂпозနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ခန်းများဖြင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သော session ကိုမျှော်လင့်ပါ။
မြန်ဆန်သောအရှိန်အဟုန်နှင့်စိန်ခေါ်မှုရှိသောယောဂသည်အခက်အခဲပိုမိုများပြားလာသောအဆင့်ခြောက်ဆင့်အတိုင်းအတာဖြစ်သည့်နောက်ဆုံးစီးရီးဖြစ်သည် (Sthira Bhaga) အလွန်အဆင့်မြင့်သောကျောင်းသားများအတွက်သာရည်ရွယ်သည်။ Ashtanga သည် Vinyasa နှင့်ဆင်တူသည် (လေ့ကျင့်မှုနှစ်ခုလုံးတွင်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းသည်သက်ရှိနှင့်ဆက်စပ်သည်) တူညီသောအဆင့်များကိုအမြဲတူညီစွာပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ယောဂကိုမယုံတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိသလား။ သူမကိုဤခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်ချက်ရှိသည့်အတန်းသို့ခေါ်သွားပါ။ သူမသည်သူမ၏တင်းပါးချွတ်ချွေးပါလိမ့်မယ်။
အလွယ်တကူပျင်းလာပြီးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုမုန်းတဲ့သူတွေအတွက်၊ ဒီအရည်အလေ့အကျင့်ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ Vinyasa တွင်ဆရာများသည်ယောဂ၏မတူညီသောဒြပ်ပေါင်းများကိုလွတ်လပ်စွာထည့်သွင်းနိုင်ပြီးကျောင်းသားများကို pose တစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့ချောချောမွေ့မွေ့ကူးပြောင်းသွားစေသည်။ ၎င်းသည် Ashtanga နှင့်အလွန်ဆင်တူသော်လည်းခြားနားချက်မှာ vinyasa အတန်းနှစ်ခုမျှမတူပါ။
ချွေးထွက်တာဟာမင်းရဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုရင် Bikram ကမင်းအတွက်ပါ။ ၂၆ ခုမှအပူဖြင့် ၁၀၅ ဒီဂရီအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆ ၄၀% အထိဖြတ်သန်းပါ။ သင်တန်းများသည်မိနစ် ၉၀ ကြာပြီးပရိုတက်စတင့်များကအပူသည်ကိုယ်ခန္ဓာမှအဆိပ်များကိုထုတ်လွှတ်ပေးပြီးပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်အထောက်အကူပြုသည်ဟုဆိုသည်။ ထိပ်တန်းအစွန်အဖျား - ဓါတ်ကိုပြန်လည်မွမ်းမံရန်မမေ့ပါနှင့်။
ထပ်တလဲလဲကိုယ်ဟန်အနေအထားပါဝင်သောပြင်းထန်သောနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာယောဂ (kriyas) , ရှူရှိုက်မိခြင်း၊ သီချင်းဆိုခြင်းနှင့်တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း (အခြားနှာခေါင်းရှူခြင်းကဲ့သို့သော) အသက်ရှူကိရိယာများ။ Kundalini yogis သည်မြွေစွမ်းအင်ကိုနိုးထစေရန်အစဉ်အလာအဖြူနှင့်အလေ့အကျင့်ရှိသည် (kundalini) ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း၌ ပို၍ ပျော်ရွှင်သောကျန်းမာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အသိအမြင်တို့ကိုရရှိစေသည်။
တိကျသောအမျိုးအစားများသည် Iyengar ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုမှန်ကန်စွာခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလုပ်ကွက်များ၊ စောင်များ၊ ခါးပတ်များနှင့်ကျားကန်များကဲ့သို့သောကျားကန်များအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ရရှိသည်။ ပရိဘောဂယောဂအမည်ဖြင့်ခေါ်ဝေါ်သောဤအလေ့အကျင့်သည်အဆင့်တိုင်းနှင့်အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက်သင့်လျော်ပြီးတမင်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သင့်လျော်သောကိုယ်ဟန်အနေအထားများကိုအာရုံစိုက်သည်။
ဤနေရာတွင်ရည်မှန်းချက်မှာကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ကိုဖြေလျော့ရန်ဖြစ်သည်။ လက်ျာအသံကောင်းတယ်? အိုး၊ Iyengar ယောဂမှဆင်းသက်လာသောကျားကန်များကိုလည်းဤနေရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ကုလားထိုင်များ ပုံမှန်အားဖြင့်ငါးမိနစ် (သို့) ထိုထက်ပိုကြာအောင်ပြုလုပ်ထားသော passive pose များနှင့်စောင်များ) ။ ကျနော်တို့ဒါဝေးအရွယ်ရောက်သူများအတွက်အိပ်ပျော်ခြင်းအချိန်မခေါ်အဖြစ်မသွားဘူး, ဒါပေမယ့်တော်တော်လေးသူကပြောတယ်နီးကပ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ယောဂသည်ကြီးထွားလာသောဗိုက်ကိုထောက်ပံ့ရန်ကြွက်သားများကိုဆန့ ်၍ အားဖြည့်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။ လေ့ကျင့်သူများသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေသည့်အန္တရာယ်များနှင့်ရှူရှိုက်ခြင်းနည်းစနစ်များမှတဆင့်မကြာခဏတင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်၊ (၎င်းသည်အခြားမိခင်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်လည်းပျော်စရာနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ )
သက်ဆိုင်သော: ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်းအဆင့်တိုင်းသင်လုပ်နိုင်သောလေ့ကျင့်ခန်း ၆
Taoist ယောဂဟုလည်းလူသိများသောဤတရားအားထုတ်ခြင်းသည် Ashtanga ကဲ့သို့ပိုမိုမြန်ဆန်သောရွေ့လျားမှုပုံစံများကိုဖြည့်ဆည်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ Yin ယောဂпозများသည် passive ဖြစ်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်မျှကြာအောင်ပြုလုပ်ထားပြီးနက်ရှိုင်းသောတစ်ရှူးများ (fascia ကဲ့သို့) နှင့်အဆစ်များသို့ဝင်ရောက်ရန်အာရုံစိုက်သည်။ အားကစားခန်းမတစ်ခုအပြီးတွင်မည်သည့်အနာကြွက်သားကိုမဆိုဆန့်ရန်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်၎င်းကိုစဉ်းစားပါ။
သက်ဆိုင်သော: ယောဂအတန်းတိုင်းတွင်တွေ့ရသည့်လူ ၉ ယောက်
Categories ဘယ်လို စိတ်ဖိစီးမှု၏ ကြည့်ရမယ်